ကီလိုဂရမ် စံသတ်မှတ်ချက် ပြောင်းလဲ - BBC News မြန်မာ
ကီလိုဂရမ် စံသတ်မှတ်ချက် ပြောင်းလဲ
Image caption ပြင်သစ်မှာ လုံခြုံစွာသိမ်းထားတဲ့ ရွှေဖြူချောင်း ကီလိုဂရမ် စံသတ်မှတ်ချက် နဲ့ အဲဒီစံထားချက်ကို တိုင်းတာယူသွားတဲ့ တခြား ကီလိုဂရမ် အကြား ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့
ကီလိုဂရမ် စံသတ်မှတ်ချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တညီတညွတ်တည်း ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။
အခုလက်ရှိမှာ ၁ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန် အဖြစ် "Le Grand K" လို့ခေါ်တဲ့ ရွှေဖြူချောင်း တခုကို သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အဲဒါကို ပြင်သစ် နိုင်ငံမှာ လုံခြုံစွာ သော့ခတ် သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသီတွေရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ချက် ညီလာခံ ကနေ လက်ရှိ ရွှေဖြူချောင်း သတ်မှတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပြီး၊ လျှပ်စစ် စီးကြောင်း တခုနဲ့ တကီလိုဂရမ် သတ်မှတ်ဖို့ ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ တချို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အခုလို အပြောင်းအလဲ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒွိဟ ဖြစ်သလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောကြ ပါတယ်။
ဗြိတိန်က အမျိုးသားရူပဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းက ပညာရှင် ပါဒီ ဝီလျံစ် က ဒါဟာ စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းပြီး၊ အပြောင်းအလဲ အတွက် နည်းနည်းတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်မှုဟာ အရေးကြီး တဲ့ ရှေ့တိုး ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပြီး၊ အများကြီး ပိုမို ကောင်းမွန် လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
အရင် စံသတ်မှတ်ချက်ကို ဘာလို့ ဖျက်ရတာလဲ
Le Grand K ဆိုတဲ့ ရွှေဖြူချောင်းကို နိုင်ငံတကာ အလေးချိန် သတ်မှတ်ချက် အဖြစ် ၁၈၈၉ ခုနှစ် ကတည်းက အရင်ဆုံး စံထား သတ်မှတ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီနောက် ပုံတူ အလေးချိန်တူ ကိုယ်ပွားတွေ လုပ်ယူပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြန့်ကြက် ထားရှိခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့်လို့ ပြင်သစ်က စံထား ကီလိုဂရမ်နဲ့ ပုံတူ မျိုးကွဲတွေဟာ အချိန်ကြာလာ တာနဲ့ အမျှ ပျက်စီးမှု အတိုင်းအတာ ရှိခဲ့ပြီး အလေးချိန် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တာကို လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလေးချိန် တိုင်းတာမှု မှန်ကန်ဖို့ ဟာ တချို့ နယ်ပယ်တွေ အတွက် အင်မတန်မှ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှု၊ နန်နိုနည်းပညာနဲ့ အနုစိတ် တိုင်းတာရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာ နယ်ပယ်တွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BIPM
Image caption အလေးချိန် နဲ့ အတိုင်းအတာ အထွေထွေညီလာခံကနေ စံထားပြောင်းလဲမှုကို အတည်ပြုခဲ့
Le Grand K ရွှေဖြူချောင်း သတ်မှတ်ချက်က ဘယ်လို မှားယွင်းလဲ?
အတက်အကျ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုက သန်းတထောင်မှာ ၅၀ လောက် ပြောင်းလဲတာပါ။ ဆိုလိုတာက မျက်တောင်မွှေး တပင် ရဲ့ အလေးချိန် ထက်ကို လျော့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလောက် အင်မတန်မှ သေးငယ်လှတဲ့ အလေးချိန် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင် ပါတယ်။
အခု အသုံးပြုမယ့် လျှပ်စစ်နဲ့ တိုင်းတာ မှုကတော့ ပိုပြီး တည်ငြိမ်ကာ မှန်ကန်မှုရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြင်သစ်က စံထားချက် နဲ့ ပုံတူယူထားတဲ့ ကမ္ဘာတလွှားက ကီလိုဂရမ် သတ်မှတ်ချက်တွေ ကြားမှာ ကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ ရှိနေ ပါတယ်။
အခုစံနစ်သစ်က ဘယ်လောက် အလုပ်ဖြစ်မလဲ?
လျှပ်စစ်သံလိုက်က အားတခုကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကား သင်္ချိုင်း တွေက ဝန်ချီစက်တွေဟာ အလေးချိန်ကြီးတဲ့ ကားအဟောင်း လို သတ္တုစတွေကို မဖို့ ရွှေ့ဖို့ အတွက် ဒီအားကို အသုံးပြုတာပါ။
လျှပ်စစ် သံလိုက်အားဟာ လျှပ်စစ် စီးကြောင်း ပမာဏနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ် နဲ့ အလေးချိန် အကြား တိုက်ရိုက် အချိုးကျ ပတ်သက် နေပါတယ်။
ဒီအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် ၁ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ တခြား အလေးချိန် တွေ အတွက်လည်း အလေးချိန်ကို တန်ပြန် ပင့်မနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ် စီးအား ပမာဏ နဲ့ တိုင်းတာ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလေးချိန်နဲ့ လျှပ်စစ်စီကြောင်း ကြား ဆက်စပ်နေတဲ့ ပမာဏ ကို ပလန့်ခ် ကိန်းသေ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျာမန် ရူပဗေဒ ပညာရှင် မက်စ် ပလန့်ခ် ကို တင်စား ပြီး ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာပါ။ သင်္ကေတ အားဖြစ် h လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကိန်းသေ h ဟာ အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့ နံပါတ် ဖြစ်တာကြောင့် ဒါကို တိုင်းတာဖို့ အတွက် သုတေသီ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ ဘရိုင်ယန် ကစ်ဘယ် ကနေ အင်မတန်မှ တိကျမှန်ကန်တဲ့ ဆူပါ ချိန်ခွင် တခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ကစ်ဘယ် ချိန်ခွင် လို့ နာမည် ပေးထားပြီး၊ သူ့မှာ လျှပ်စစ် သံလိုက်ပါရှိကာ၊ အဲဒီ သံလိုက်ကနေ တခြား တဘက်က ၁ ကီလိုဂရမ် အလေးကို မြင့်တက်လာအောင် ဆွဲချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချိန်ခွင်လျှာ အတိအကျ ညီတဲ့ အထိ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရဲ့ အားကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိန်ခွင်လျှာညီပြီ ဆိုရင် အဒီ လျှပ်စစ် သံလိုက်အားကို ၁ ကီလိုဂရမ် အဖြစ် စံထား သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစံသတ်မှတ်ချက်ကို "die kleine h" လို့ခေါ်ပြီး အရင် ရွှေဖြူနဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် Le Grand K ကို ဖျက်သိမ်းမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Image caption မဲပေးတဲ့ ရလဒ် ထွက်လာပြီးနောက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အောင်ပွဲခံ